mairie-antananarivo – Dian’ny Ben’ny tanàna tany CANADA sy tany TSHWANE
auteur 4 jolay 2017 Commentaires fermés
Ny fanambarana ny Montréal na « Déclaration de Montréal » dia nametraka ireto tanjona roa ireto : les Villes, fer de lance pour relever les défis locaux et globaux et mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat na adika malalaka hoe Ny tanan-dehibe no fanoitra ahafaha-miatrika ireo fanamby ifotony sy iraisam-pirenena ary koa enti-mampihatra ny Fifanarahan’ny Parisy momba ny toetr’andro (Cop 21).
Io fanambarana io dia manisy tsindri-peo ny fanomezana antoka ny tanan-dehibe fa handray an-tanana ny fampandrosoana ara-toe-karena sy fampandrosoana maharitra ny fisokafana, ny fitoviana, ny fandriam-pahalemana sy ny fiaraha-miaina ; izany dia atao ao anaty ny firaisan-kina hanoherana ny herisetra.
Ankoatr’izany voalaza fa:
« ambaranay ny fahavononanay hiara-hiasa amin’ny rafi-pitondram-pirenena sy rafi-pitondrana iraisam-pirenena,
Anaovanay antso avo ny rafi-pitondram-pirenena sy ny rafi-pitondrana iraisam-pirenena mba hihaiky fa tokony hanana fahefana sy enti-manana mifanaraka amin’ny adidy aman’andraikiny ny tanan-dehibe,
Anaovanay antso avo ny rafi-pitondram-pirenena sy ny rafi-pitondrana iraisam-pirenena mba hankato ny anjara toerana tokony homena ny tanan-dehibe eo amin’ny latabatry ny fifampiraharahana sy fikaonan-doha iraisam-pirenena, ary koa mamolavola lasi-pitantanana vaovao mifanaraka amin’ny asa aman’andraikitr’izy ireo »
Raha atao indray mijery dia loha-hevitra mifandraika amin’ny fampiharana ny Fifanarahan’ny Parisy sy fanamafisana ny satan’ny olom-boafidy ifotony (statut de l’élu local) no nizoran’ny laha-dinika rehetra nandritra ny roa andro maninjitra.
Ohatra mifandraika amin’ny Fifanarahan’ny Parisy (Cop 21) :
- Intégration régionale (économique et des femmes)
- Réseautage des Villes
- Changement climatique et gestion des catastrophes naturelles
- Services essentiels (accès à l’eau, assainissement et gestion des déchets)…
Ohatra mifandraika amin’ny satan’ny olom-boafidy ifotony :
- Plaidoyer pour un statut clair de l’élu local
- Place de la femme dans l’espace publique (femme leader, femme maire)
- La nouvelle gouvernance municipale
- Les finances locales, …
Ny fomba nitondrana ny fivoriana dia mizara roa: famelabelaran-kevitra notarihan’ny tompon’andraikitra sy manam-pahaizana ary fanehoan-kevitra sy plaidoyer amin’ny trangan-javatra manokana any amin’ny tanan-dehibe tsirairay avy.
Ny tananan’Antananarivo tamin’ny alalan’ny Ben’ny tanàna Ramatoa Lalao Raalomanana dia nanao plaidoyer mahakasika ny statut de l’élu local. Raha atao bango tokana dia napetraka mazava ireto teboka ireto : tsy fanarahan-dalàna, fanaovana tsindry hazo lena, fibahanana ankitsirano ny fampandrosoana ny tanàna, fanaovana didiko fe lehibe. Ireo antsojay voalaza rehetra ireo dia nampiharin’ny fitondrana foibe amin’ny Kaominin’Antananarivo Renivohitra sy ny Kaominina hafa. Nanome ohatra sy namoaka ny rijan-dalàna momba ireo antsojay ireo ny solontenan’Antananarivo tahaka ny fanendahan’ny fanjakana ny logo an’ny CUA amin’ny certificats de vie, de résidence, sns, ny fanendrena sefo fokontany tsy nandalo fifidianam-pokonolona na dia efa nahavita herintaona sy tapany ny Ben’ny tanàna vaovao, ny fananganana trano tsy nahazo permis sady eo ambony buse.
Natao tao Tshwane, Renivohitr’i Afrika Atsimo tamin’ny Faha 13 hatramin’ny Faha 15 Jona teo ny Fivoriambe Fahatelo momba ny Fampandrosoana maharitra hoan’ny Renivohitry ny Firenena Afrikana. Nandray anjara tamin’izany ny Ben’ny Tanànan’Anananarivo-Renivohitra Rtoa Ravalomanana Lalao.
Lohahevitra maro no nodinihana sy nifampizarana traikefa teo amin’ireo Ben’ny Tanana sy manam-pahaizana isan-karazany, amin’ny sehatry ny fampandrosoana.
Maro ny olana sy fanamby iarahan’ny Ben’ny tananan’ny renivohitra afrikana miatrika, amin’ny lafin’ny fampandrosoana maharitra.
Voareasaka tamin’izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa afahana mifandray sy manamora ny fandraharahana. Tao ka ny momba ny famatsiana rano fisotro madio sy ny famatsiana angovo. Tsy adino ny fanadiovana ny tanan-dehibe sy ny fanodinana ny fako ho lasa angovo, ary ny fikajiana ny tontolo iainana.
Voaresaka ihany koa ny olana iraisana, amin’ny fanatanterahana ny asa. Misy tokoa aty Afrika ny Ben’ny Tanana misedra olana, rehefa tsy mitovy antoko politika amin’ny mpitondra.
Tamin’ny famaranana ny Fivoriambe dia nisy ny Fanambarana Iombonana. Koa anisan’ny lohahevitra amin’izany Fanambarana izany:
- Ny filazana fa zava-dehibe ary tena ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’ny Governemanta sy ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ary ny andrim-panjakana hafa, hisian’ny fitoaviam-pijery hitadiavana vahaolana mahomby kokoa amin’ny fiantrehana ny fanambin’ny fampandrosoana maharitra.
Zava-dehibe ny anjara birikin’ny Tanan-dehibe amin’ny fampandrosoana maharitra. Koa tokony amafisina ny fitsinjarana sy fanapariham-pahefana sy ny fahazoana ny enti-manana rehetra, hafahana manafaingana ny tetikasa fampandrosoana hoan’ny tanan-dehibe.
Fivoriambe roa sosona ny tany Montréal, Canada, tamin’ny Faha 19 jiona hatramin’ny faha 22 Jiona. Fivoriambe Faha 37- ny Fikambanan’ny Ben’ny Tanana miteny Frantsay (37ème Assemblée Générale de l’Association Internationale des Maires Francophones – AIMF) sy ny Fivoriambe faha 12 –ny Metropolis (12ème Congrès Mondial de Metropolis).
Ben’ny Tanàna 150 avy amin’ny tanàn-dehibe maneran-tany no tonga nivory sy fanakalo hevitra, ary nifampizara traikefa tamin’izany.
Nifandray tamin’ny lohahevitra noresahina tao Afrika Atsimo ihany ny lohahevitra tany Canada, satria samy fampandrosoana ny tanan-dehibe hatrany no nodinihana, na tao Afrika Atsimo , na tany Montréal, Canada.
Tsy mahagaga noho izany raha nohamafisin’ny Fanambarana Iombonana tany Montréal ny fanambarana Iombonana natao tao Afrika Atsimo.